သတင်းစုံ Archives - MM Live News
သရုပျဆောငျ”မငျးသှေး” လူဝငျစားပွနျဖွဈပွီ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ အဆိုတျော မငျးသှေးဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလ ၃ ရကျနကေ့ ဘောလုံးကနျရငျး အမောဖောကျရာမှ လဲကခြဲ့ပွီး ပါရမီ ဆေးရုံ သို့ အရေးပျေါ ပို့ဆောငျခဲ့ပမေယျ့ အသကျမမီခဲ့ဘဲ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။ သဆေုံးခြိနျမှာ မငျးသှေးဟာ အသကျ ၃၃နှဈ ရှိပွီဖွဈပွီး သူကှနျလှယျမှုအပျေါပရိသတျမြားနှငျ့ အနုပညာရှငျးမြား ဝမျးနညျးကွကှေဲခဲ့ရပါတယျ။အခုတဈခါမှာတော့ မငျးသှေးတဈယောကျ လူပွနျဝငျစားပွီလို့ သတငျးမြား ထှကျပျေါလာပါတယျ။ လူမှုကှနျရကျပျေါ “အရှငျနာရဒ” အကောငျ့မှ အခုလို ဖျောပွထားပွီး မှတျခကျြအမြိုးမြိုးပေးထားကွပါတယျ.။ Myanmar Online News ပရိသတျကွီး ရော မှတျခကျြပေးသှားပါဦး။ “မငျးသှေး” “‘ယောကျြား ညက အိပျမကျ ထူးခွားတယျသိလား ‘ဘာတှမေကျလို့လဲ နနျး .. ထီဂဏနျးလား .?“ဟုတျပါဘူး ဆုံးသှားတဲ့ […]
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးမိတ်တီလာမွို့စကျမှုဇုံ(၄)လမျးရှိယက်ကနျးအလုပျသမားတနျးလြားတှငျဖခငျဖွဈသူမှသမီးအရငျးအားတဈနတေ့ညျးနာရီခွား၍အလိုမတူပဲသားမယားအဖွဈ(၂)ကွိမျတိုငျပွုကငျြ့မှုဖွဈပှားခဲ့ကွောငျးစုံစမျးသိရသညျ။ လှနျခဲ့သော(၃)လခနျ့(နရေ့ကျမမှတျမိ)ည(၉)နာရီအခြိနျခနျ့မ_________(၁၇)နှဈမှယက်ကနျးအလုပျနား၍ဖခငျဦးကြျောစိုးနှငျ့အတူနထေိုငျသောမိတ်တီလာမွို့စကျမှုဇုံ(၄)လမျးရှိယက်ကနျးအလုပျသမားတနျးလြားတှငျတဈဦးတညျးရှိနစေဉျဖခငျဦးကြျောစိုးရောကျရှိလာပွီးမပွောမဆိုပါးစပျပိတျကာအလိုမတူပဲသားမယားအဖွဈ(၁)ကွိမျပွုကငျြ့ကွောငျး…… (၃)နာရီခနျ့အကွာဖခငျဦးကြျောစိုးမှသားမယားအဖွဈ(၁)ကွိမျထပျမံပွုကငျြ့ခဲ့ပွီးမညျသူကိုမှပွောဆိုခွငျးမပွုရနျပွောကွောငျးထိုသို့ဖွဈပှားပွီးစကျတငျဘာ(၉)ရကျ၊ည(၇)နာရီခနျ့နအေိမျခနျးတှငျအိပျနစေဉျဖခငျဦးကြျောစိုးနှငျ့၎ငျး၏ဇနီးဒျေါကွညျကွညျဝငျး(မိထှေးတျောစပျသူ)တို့စကားမြားနသေညျတှရှေိ့ရပွီ…..းဖခငျဦးကြျောစိုးမှဒျေါကွညျကွညျဝငျးအားနှငျခသြဖွငျ့ဆငျးသှားခဲ့ကွောငျးစကျတငျဘာ(၁၆)ရကျနတှေ့ငျစကျမှုဇုံရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးမှစကျမှုဇုံရဲကငျးသို့ခဏလိုကျခဲ့ရနျလာရောကျချေါဆောငျ၍လိုကျသှားရာစကျမှုဇုံရဲကငျးတှငျမိထှေးဒျေါကွညျကွညျဝငျးအားတှရှေိ့ရပွီးဒျေါကွညျကွညျဝငျး၏ပွောပွခကျြအရ…… ဖခငျဦးကြျောစိုးနှငျ့နထေိုငျခဲ့သညျတိုငျကွားထားကွောငျးဖွဈစဉျအမှနျအားပွောပွရနျအုပျခြုပျရေးမှပွောဆိုသဖွငျ့မ………..မှ၎ငျးအားဖခငျဖွဈသူဦးကြျောစိုးမှအလိုမတူပဲသားမယားအဖွဈ(၂)ကွိမျတိုငျပွုကငျြ့ခဲ့သညျကိုပွောပွခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ ဖွဈစဉျအရသမီးဖွဈသူမ………(၁၇)နှဈစကျမှုဇုံရပျကှကျမိတ်တီလာမွိူနသေူမှ၎ငျးအားအလိုမတူပဲသားမယားအဖွဈ(၂)ကွိမျတိုငျပွုကငျြ့ခဲ့သူဖခငျဦးကြျောစိုးအားအရေးယူပေးပါရနျစကျတငျဘာ(၁၇)ရကျတှငျလာရောကျတိုငျတနျးခကျြအရမိတ်တီလာမွို့ အမှတျ(၃)နယျမွရေဲစခနျး(ပ)၃၃၂/၂၀၁၉ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၇၆ ဖွငျ့အမှုဖှငျ့အရေးယူပွီး….. ပွဈမှုကြူးလှနျသူကြျောစိုး(၅၂)နှဈယက်ကနျးလုပျသားစကျမှုဇုံ(၄)လမျးမိတ်တီလာမွို့နသေူအားစကျတငျဘာ(၁၇)ရကျည(ရး၄၀)အခြိနျဖမျးဆီးရမိပွီးအမှုနှငျ့စဈဆေးဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျးသိရသညျ။ ရှမေောငျမောငျ(မိတ်တီလာ) / SH-သတငျးဋ်ဌာန zawgyi မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိတ္တီလာမြို့စက်မှုဇုံ(၄)လမ်းရှိယက္ကန်းအလုပ်သမားတန်းလျားတွင်ဖခင်ဖြစ်သူမှသမီးအရင်းအားတစ်နေ့တည်းနာရီခြား၍အလိုမတူပဲသားမယားအဖြစ်(၂)ကြိမ်တိုင်ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရသည်။ လွန်ခဲ့သော(၃)လခန့်(နေ့ရက်မမှတ်မိ)ည(၉)နာရီအချိန်ခန့်မ……..(၁၇)နှစ်မှယက္ကန်းအလုပ်နား၍ဖခင်ဦးကျော်စိုးနှင့်အတူနေထိုင်သောမိတ္တီလာမြို့စက်မှုဇုံ(၄)လမ်းရှိယက္ကန်းအလုပ်သမားတန်းလျားတွင်တစ်ဦးတည်းရှိနေစဉ်ဖခင်ဦးကျော်စိုးရောက်ရှိလာပြီးမပြောမဆိုပါးစပ်ပိတ်ကာအလိုမတူပဲသားမယားအဖြစ်(၁)ကြိမ်ပြုကျင့်ကြောင်း…… (၃)နာရီခန့်အကြာဖခင်ဦးကျော်စိုးမှသားမယားအဖြစ်(၁)ကြိမ်ထပ်မံပြုကျင့်ခဲ့ပြီးမည်သူကိုမှပြောဆိုခြင်းမပြုရန်ပြောကြောင်းထိုသို့ဖြစ်ပွားပြီးစက်တင်ဘာ(၉)ရက်၊ည(၇)နာရီခန့်နေအိမ်ခန်းတွင်အိပ်နေစဉ်ဖခင်ဦးကျော်စိုးနှင့်၎င်း၏ဇနီးဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း(မိထွေးတော်စပ်သူ)တို့စကားများနေသည်တွေ့ရှိရပြီ…..းဖခင်ဦးကျော်စိုးမှဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းအားနှင်ချသဖြင့်ဆင်းသွားခဲ့ကြောင်းစက်တင်ဘာ(၁၆)ရက်နေ့တွင်စက်မှုဇုံရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှစက်မှုဇုံရဲကင်းသို့ခဏလိုက်ခဲ့ရန်လာရောက်ခေါ်ဆောင်၍လိုက်သွားရာစက်မှုဇုံရဲကင်းတွင်မိထွေးဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းအားတွေ့ရှိရပြီးဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း၏ပြောပြချက်အရ…… ဖခင်ဦးကျော်စိုးနှင့်နေထိုင်ခဲ့သည်တိုင်ကြားထားကြောင်းဖြစ်စဉ်အမှန်အားပြောပြရန်အုပ်ချုပ်ရေးမှပြောဆိုသဖြင့်မ………..မှ၎င်းအားဖခင်ဖြစ်သူဦးကျော်စိုးမှအလိုမတူပဲသားမယားအဖြစ်(၂)ကြိမ်တိုင်ပြုကျင့်ခဲ့သည်ကိုပြောပြခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်အရသမီးဖြစ်သူမ………(၁၇)နှစ်စက်မှုဇုံရပ်ကွက်မိတ္တီလာမြိူနေသူမှ၎င်းအားအလိုမတူပဲသားမယားအဖြစ်(၂)ကြိမ်တိုင်ပြုကျင့်ခဲ့သူဖခင်ဦးကျော်စိုးအားအရေးယူပေးပါရန်စက်တင်ဘာ(၁၇)ရက်တွင်လာရောက်တိုင်တန်းချက်အရမိတ္တီလာမြို့ အမှတ်(၃)နယ်မြေရဲစခန်း(ပ)၃၃၂/၂၀၁၉ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့်အမှုဖွင့်အရေးယူပြီး….. ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကျော်စိုး(၅၂)နှစ်ယက္ကန်းလုပ်သားစက်မှုဇုံ(၄)လမ်းမိတ္တီလာမြို့နေသူအားစက်တင်ဘာ(၁၇)ရက်ည(၇း၄၀)အချိန်ဖမ်းဆီးရမိပြီးအမှုနှင့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ရွှေမောင်မောင်(မိတ္တီလာ) / SH-သတင်းဋ္ဌာန
အားလုံး သတိထားကွပါ ⛔⛔⚠️ မနကေ့ နလေ့ညျ ၁၂နာရီခနျ့က အျိမျကို အလှူခံယောငျဆောငျပီး လူ ၅ ယောကျအရငျလာကွတယျ…. အပွငျသှားခါနီးခွံတံခါးဖှငျ့ထားတာနဲ့ ကွုံတော့ အတငျးဝငျလာပီး ရဘေေးသငျ့အတှကျဆိုပီး လှူခိုငျးတယျ….( အမရပူရ ဥက်ကဌကွီးရဲ့ လကျမှတျနဲ့ စာရှကျတှေ ပါယူလာပွတယျ ) မလှူတော့ဘူး ပွောလဲမရဘူး လှူရမယျဆိုပီး ယောကျြား၅ယောကျက ကမြကို ဇှတျကပျလာကွတယျ .. ဝိုငျးထားတယျ.. .. ပွောနရေငျးနဲ့ သူတို့အုပျစု လူ ၄ ယောကျထပျရောကျလာတယျ ခွံအပွငျမှာကြ ၃ ယောကျစောငျ့နတေယျ… အခွနေမေကောငျးတော့ဘူးဆိုတာသိလို့ ဘယျလောကျပဲဖွဈဖွဈ အလှူငှထေညျ့လိုကျမယျဆိုပီး ( မဟုတျရငျခွံထဲကနေ မထှကျဘူး ) ပိုကျဆံသှားယူလိုကျအုံးမယျ ဆိုပီး အိမျထဲသှားတုနျးရှိသေးတယျ….လူတယောကျက ခွံထဲက ဂိုဒေါငျဘကျကို ပွေးဝငျသှားတယျ ….. ( အိမျထဲက […]
ကျပ်သိန်းပေါင်း ၉၅ဝဝ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ မန္တလေးက အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်လူငယ်
September 17, 2019 MM Live
ကျပ်သိန်းပေါင်း ၉၅ဝဝ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မန္တလေးက လူငယ် / Tuesday, September 17, 2019 မန္တလေးမြို့မှ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ဦးက ၎င်းရရှိမည့်အမွေများထဲမှ ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၉၅ဝဝ ကို ပြင်ဦးလွင်ရှိဖားအောက်တောရသို့ လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ကျောက်ဖျာ ဒိုးကျေးရွာရှိ ဖားအောက်တောရ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွင် အသုံးပြုရန် ရန်ကုန်၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ နေအိမ်နှင့်မြေအပါအဝင် အကျိုးခံစားခွင့် အားလုံးကာလတန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၉ဝဝဝ၊ မန္တလေးပြည်ကြီးတံခွန် ပွဲရုံတန်း အဆောင် ၂ အခန်း ၃၊ ၂ ထပ်တိုက် ကာလတန်ဖိုး ကျပ် သိန်း ၅ဝဝ ခန့်တို့ကိုအပြီးအပြတ် လှူဒါန်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ လှူဒါန်းခဲ့သူ မန်းမြို့တော် ပေါက်စီလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ […]
သိုးမွှေအထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် ပရလောကသားများ ဝင်ရောက်ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွား
Myanmar Kitting Factory (သိုးမွှေအထည်ချုပ်စက်ရုံ)တွင် ပရလောကသားများ ဝင်ရောက်ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွား ပုသိမ် စက်တင်ဘာ ၁၆ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ပုသိမ်မြို့၊အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊မြက်တိုမှာ ရှိတဲ့Myanmar Kitting Factory (သိုးမွှေးအထည်ချုပ်စက်ရုံ) မှာ (၁၆.၉.၂၀၁၉)ရက်နံနက်မှာ….. အလုပ်သမားတစ်ချို့ကို ပရလောက သားတွေဝင်ရောက်ပူးကပ်ပြီး ၎င်းတို့လိုအပ်ချက်များကို ပူးကပ်ပြောဆို ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပူးကပ်နေတဲ့ VIDEO တွေမတင်ပေမဲ့ သူတို့ကျွတ်တန်းဝင်ချင်တယ် ဆိုတာကိုတော့အတိအကျ ပြောဆိုသွားပါတယ်…အရင်တုန်းကစက်ရုံက ကတိပေးထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့ ဘာတွေ ကတိပေးထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရပါဘူး၊ အဓိကကတော့အလှူအတန်းပြုပေးဖို့ဆိုတာတော့ပြောပါတယ်။နံနက်(၈)နာရီမှာ စက်ရုံအလုပ်သမားအားလုံးကို ပြန်ခိုင်းတယ်လို့် သိရပါတယ်။ #ပုသိမ်သတင်းစုံ / မြက်တိုမှာရှိတဲ့ SH သတင်းထောက် Kyaw Kyaw ကသတင်း ပေးပိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ unicode Myanmar Kitting Factory (သိုးမှအေထညျခြုပျစကျရုံ)တှငျ ပရလောကသားမြား ဝငျရောကျဆန်ဒပွမှုဖွဈပှား ပုသိမျ စကျတငျဘာ ၁၆ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ပုသိမျမွို့၊အမှတျ(၁၃)ရပျကှကျ၊မွကျတိုမှာ […]
မယ်တော် ကြီးရဲ့ လျှာကင်ဆာကို ကုသဖို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင်လို့ လူထွက်ပြီးအလုပ် လုပ် ငွေရှာဆေးကုပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဦးဇင်းလေး
မယ်တော် ကြီး ရဲ့ လျှာကင်ဆာကို ကုသဖို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင် လို့ လူထွက်ပြီး အလုပ် လုပ် ငွေရှာပြီး ဆေးကုပေးတော့မယ် ဆိုတဲ့ ဦးဇင်းလေး ………. မယ်တော် ကြီး ရဲ့ လျှာကင်ဆာ ကို ကုသဖို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင်လို့ လူထွက်ပြီး အလုပ်လုပ် ငွေရှာပြီး ဆေးကုပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဦးဇင်းလေး သာသနာ့ ဘောင်မှာ မြဲအောင် ကူညီပေးကြပါ အုးံ ခင်ဗျာ ။ ဦးဇင်း လေး ဘွဲ့က အရှင် ခေမိန္ဒ ပါ ရန်ကုန် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် စံ ပြ ငါးဈေးအနီး နတ်စင်လမ်း ပြည်လုးံချမ်းသာကျောင်း တိုက် မှာ သီတင်းသုးံရင်း ပရိယတ္တိ စာပေ များ သင်ကြားနေပါတယ် ။ […]
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာမိသားစု နှစ်စု ထီပထမဆု ဘတ်ငွေ (၆) သန်းဆု ပြိုင်တူပေါက်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာမိသားစု နှစ်စု ထီပထမဆု ပြိုင်တူပေါက် / September 17,2019 ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင် မှာ စက်တင်ဘာ ၁၆ (၂၀၁၉) ရက်နေ့ မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ ပထမဆု ဘတ်ငွေ (၆) သန်းဆု 340388 (၃၄၀၃၈၈) နံပါတ် ကို တနေရာထဲ ထီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ပြိုင်တူဝယ်မိခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမား မိသားစု နှစ်စု ထီပေါက် ပေါက်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ မဲဟောင်ဆောင်နဲ့ချင်းမိုင်မြို့ မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာမိသားစုဟာ ထီထွက်မယ့်နေ့မှာ ချင်းမိုင် မြို့ က Pong Noi Temple ပေါင်နွိုင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းေ၇ှ့ မှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မိသားစု နှစ်စုဟာ ပထမဆုပေါက်မယ့် […]
အိမ်ထောင်စု ၂၂ စု ကို အိမ်ဝိုင်းမြေကွက်များ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့မိသားစု
September 16, 2019 MM Live
အမွန်မြတ်ဆုံးကြီးကျယ်တဲ့အလှူပါ သုသာန်မြေ ကျူးကျော် အိမ်ထောင်စု ၂၂ စု ကို အိမ်ဝိုင်းမြေကွက်များ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့မိသားစု မကွေးတိုင်း၊ ဆိပ်ဖြူမြို့ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက် မာလာမြိုင်ကွက်သစ်ရှိ သုသာန်မြေ နေရာမှာ ကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်စု ၂၂ စုအတွက် ဒို့မြင်းပျံမုန့်တိုက် မိသားစုက အိမ်ဝိုင်းမြေကွက်တွေ မနေ့က လွှဲပြောင်းပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အလှူရှင် ဒို့မြင်းပျံမုန့်တိုက် ဦးအောင်မြင့်လွင်က “လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၄ ခုနှစ် တနေ့သားကပေါ့။ ဆိပ်ဖြူမြို့ထဲကို ဆိုင်ကယ်တစီးနဲ့ လျှောက်သွားတယ်။ တချို့ကျတော့ အရမ်းချမ်းသာတယ်၊ မြေကွက်ကြီးတွေက အကျယ်ကြီးတွေနဲ့။ သုသာန်ထဲ နေတဲ့လူတွေတော့ ဘယ်လိုများ နေကြပါလိမ့်။ မိုးရွာရင် ဘယ်လိုများ နေကြပါလိမ့်။ နေပူရင် ဘယ်လိုများ နေကြပါလိမ့်။ နောက်ပြီးတော့ ဒါ သုသာန်ဆိုတာ လူတွေ နေအပ်တဲ့ နေရာမှ မဟုတ်တာ။ […]
အိမ်အကူမိန်းကလေးကို အက်ဆစ်ဖြင့်ပက်ကာ နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်ချမှတ်
အိမ်အကူမိန်းကလေးကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်ချမှတ် / မန္တလေး စက်တင်ဘာ ၁၆ အိမ်အကူမိန်းကလေးကို မျက်လုံးတစ်ဖက် ကွယ်ကာ မျက်နှာတစ်ခြမ်းပျက်စီးစေသည်ထိ အက်ဆစ်ဖြင့်ပက်ကာပိတ်လှောင်ခဲ့သည့် အိမ်ရှင်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးအား အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် ကျခံစေရန် မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးက ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ အိမ်အကူမိန်းကလေး မနန်းမေဇင်ဦးက တရားလိုပြုလုပ်ကာ သူမအား ဘယ်ဘက်မျက်နှာတစ်ခြမ်း ပျက်စီးပြီး ဘယ်ဘက်မျက်လုံး ကွယ်သည်အထိ အက်စစ်ဖြင့် ပက်ခဲ့သူ မနီနီနုနွယ်၊ အိမ်အတွင်း နှစ်ရှည်ကြာ မြင့်စွာ ပိတ်လှောင်၍ အနိုင်အထက်ပြုကျင့်ပြီး လုပ်ခလစာမပေးဘဲ အိမ်ဖော်အဖြစ်ခိုင်း စေခြင်း၊ ပိတ်လှောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့သူ ဒေါ်မိုးမိုးနှင့် သားဖြစ်သူ ကိုသူရ (ခ) အားတီတို့ကို အရေးယူပေးရန် […]
ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ဆိတ်လေးတကောင်ကရုတ်တရက်ကြီး ထအော်နေတော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်
ခုဘဲ လေယာဉ်နဲ့မန်းလေးကိုပြန်ရောက်တယ်။ မြို့အဝင် ကျနော့်ကားရှေ့မှာသွားနေတဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ဆိတ်လေးတွေကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့တာနဲ့ ဘယ်ပို့မလို့လဲမေးတော့ သားသတ်ရုံပို့မလို့တဲ့။ဒါနဲ့ မန်းလေး Showroom ဆောက်နေတဲ့ တာဝန်ခံကျနော့်တပည့်ကိုလှမ်းမေးလိုက်တယ်။ “ဆိတ်လေးတွေငါကယ်ချင်တယ်၊ ငါ့တို့ Showroom ဆောက်နေတဲ့နေရာမှာနေရာရှိလား” လို့မေးတော့ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှုပ်နေတယ်ပြောတော့ မဝယ်တော့ဘဲနေလိုက်တော့မဲ့အချိန်မှာ …. ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ဆိတ်လေးတကောင်ကရုတ်တရက်ကြီး ထအော်နေတော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။(မဝယ်တော့မဲ့အချိန်မှာ အဲဆိတ်လေးအော်ညည်းတဲ့အသံခုထိနားထဲကြားပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတုန်းဗျာ😞) လောကမှာနေ့စဉ်သားသတ်ရုံပို့ခံနေရတဲ့သတ္တဝါတွေအများကြီးပါ။ အားလုံးကိုလိုက်ကယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သလို ကျနော်မြင်တွေ့သမျှကိုလည်းကယ်ဖို့မလွယ်လှပါဖူး။ ဒါပေမဲ့ အခုလိုအခွင့်အခါကြုံကြိုက်တုန်း တတ်အားသရွေ့ရအောင်ကယ်မယ်ဆိုပြီး အဲ့ဆိတ်လေး ၅ ကောင်လုံးကို သယ်လာတဲ့ညီလေးတွေဆီကနေ သူတို့ရဲ့အမြတ်ပါပြီး ၄ သိန်း ၂ သောင်းပေးဝယ်ပြီး ခုဘဲကယ်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်…။ သူတို့နေဖို့နေရာလည်း ရအောင်စီစဉ်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ…..။ Kyi Thar Han unicode ခုဘဲ လယောဉျနဲ့မနျးလေးကိုပွနျရောကျတယျ။ မွို့အဝငျ ကနြေျာ့ကားရှမှေ့ာသှားနတေဲ့ဆိုငျကယျပျေါက ဆိတျလေးတှကွေညျ့ရငျး စိတျထဲမှာတမြိုးကွီးဖွဈသှားတယျ။ […]